Kaspersky ရဲ့ ပြဿနာလေးတစ်ခု - MYSTERY ZILLION
Kaspersky ရဲ့ ပြဿနာလေးတစ်ခု
လိပ်မလေး အရင်က AVG 7.5 သုံးတာပါ..
အခု Kaspersky 7.0.1.125en အဲ့ဒါသုံးထားပါတယ်..
Forum ထဲမှာ ဆွေးနွေးထားကြတာတွေလိုက်ဖတ်ပြီးblack list မဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ထားတယ်..
ပြီးတော့ up to date လည်းဖြစ်နေပါတယ်..
တစ်ခုပြဿနာတက်နေတာက Gtalk မှာ အသံပြောတဲ့အခါ.. ပြောလို့မရဘူး.. လိုင်းတုံးတွေတစ်တုံးမှမတက်ဘူးဖြစ်နေတာပါ..
kaspersky ကို exit လုပ်ပြီး သုံးတော့ရနေပြန်တယ်..
အဲ့ဒါ exit လုပ်စရာမလိုပဲ သုံးလို့ရအောင် လုပ်လို့ရတဲ့နည်းများရှိမလားလို့ပါ..
kaspersky ရဲ့ trust zone ထဲမှာ gtalk ကို ထည့်ပေးလိုက်ရင်..ရပါတယ်..
လိပ်မလေးရေ...အဲဒီအကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင်လည်း ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်...မေးခွန်းမေးရင် အရင်ရှိပြီးသားတွေကို ရှာစေချင်ပါတယ်....
khunmannpayy wrote: »
trust zone ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာ တဆင့်ချင်းပြောပေးပါလား..
လိပ်မလေးက အခုမှ kaspersky ကိုစသုံးတာမို့ မသိသေးလို့ပါ..
:39::39:MZ မှာ မပြောရတာ ကြာနေပြီ..အခု၀င်ပြောလိုက်အုံးမယ်..လိပ်မလေးရေ.. အရင်က MZ က အကိုတစ်ယောက် ပြောထားတာ လေး ကိုပြန်ပြောတာပါ.။ Setting ကိုသွားလိုက်ပါ ပြီးတော့ Traffic monitoring ကိုသွားပြီးတော့ port setting ကို၀င်လိုက်ပါ အဲဒီထဲကမှ HTTP SSL ([url]https://)[/url] 443 ရဲ့ အမှန်ချစ် လေး ကိုဖြုလိုက်ရင် gtalk မှာ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ ကျွန်တော် လည်း အဲဒီလိုသုံးနေရင်းနဲ့ ....နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပါ အဲဒီထဲ က တစ်တွေ အကုန်သာဖြုတ်ပြစ်ထားလိုက်တဲ့ အဲဒါ မှ ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ အဲဒီလိုတွေ လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ.. ဆိုင်က စက်တွေအားလုံး ကျွန်တော် အဲဒီလိုအကုန်လုံး
လုပ်ထားတာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်.. ဘာပြဿနာ မှ မ၇ှိပါဘူး.. အဲဒိလိုလုပ်လိုက်တဲ့ အတွက်လည်း ဗိုင်းရပ်တွေ ပိုပြီး ၀င်မလာ ပါဘူး ခင်ဗျ........
လိပ်မလေး လည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်... :39::39::39:
trust zone ထဲ၀င်ပြီး Gtalk ကိုထည့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်...
ကို noor ပုံနဲ့အတူပြောပြထားပေးတာလည်းတွေ့ပါတယ်..
လိပ်မလေးတင်ထားတဲ့ kaspersky setting မှာ Traffic monitoring ဆိုတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ..
လိပ်မလေးမှာပေါ်နေတဲ့ setting အတိုင်းအပုံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီ thread မတင်ခင်ဆင်တူ thread တွေရှိမလားလို့လိပ်မလေးလိုက်ကြည့်ပါသေးတယ်..
လိပ်မလေးတင်ထားတဲ့ပို့စ်ကအပိုဖြစ်နေရင်.. MZ အုပ်ချုပ်သူတွေကစီစစ်ပြီးဖျက်လို့ရပါတယ်..
ကိုကို၀င်းလမ်းညွှန်ထားပေးလို့.. လိပ်မလေး အဲ့ဒီ Thread ကိုဖတ်ပြီးပါဘီ..
လိပ်မလေးတင်ထားတဲ့ kaspersky setting မှာ Traffic monitoring ဆိုတာရှာလို့မတွေ့လို့ပါ..
ကိုကို၀င်းရေ.. ဆွေးနွေးချက်အဟောင်းရှိတဲ့နေရာကို လမ်းညွှန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
နေ့လည်လောက်ကထိ Traffic monitoring ဆိုတာကိုရှာလို့ကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာ..
မနေ့ညကလည်းရှာတယ်.. တွေ့ဘူး.. (မျက်စိတော်တော်မှုန်နေဘီနဲ့တူတယ်..)
အခုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါဘီ.. Gtalk မှာလည်းအသံပြောလို့ရဘီ..
ပြောပြပေးတဲ့ MZ member တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
MZ အုပ်ချုပ်သူများလည်းလိပ်မလေးတင်ထားတဲ့ Thread အပိုတစ်ခုဖြစ်နေလို့ ဖျက်နိုင်ပါတယ်..
အဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲ mark ဖြုတ်ပြီးစမ်းကြည့်တာ လိုင်းမတက်ဘူး။
mark တွေအားလုံးဖြုတ်ပြီး စမ်းကြည့်တော့ အိုကေသွားတယ်..
No controllable port is selected in network setting.
This means loss of network traffic control.
Do u really want to use these settings??
mark တွေအားလုံးဖြုတ်ပြီး OK ပေးတော့ အဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပါတယ်..
Yes လုပ်ပြီး Gtalk စမ်းကြည့်တော့ Gtalk မှာအသံပြောလို့ရသွားတယ်..